घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरुको नियत प्रती घृणा लाग्छ- सिम्रन भट्ट « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ माघ १७ गते शनिवार प्रकाशित
भनिन्छ मानिसको जीवनमा सुख दुख आउँछन् जान्छन् । मानिस सधै भरि सुखी पनि हुदैन् र दुखी पनि हुदैन् न अजम्बरी हुन्छ मान्छे त् नासिक हो । जिवनमा आएका आरोह अबरोह अनेक स्मरणीय यात्रा जुन मेरो लागि अझै कापी छन ।
मान्छेको जीवन पुर्ण छैन । मान्छे अनेको कुराको खोजिमा हुन्छ सन्तुष्टि कहिले हुन सक्दैन मान्छे । हिजोसम्म एक छाक टार्नको लागि दु:ख गरेर बसेको मान्छे दुई छाकसम्म पुर्याउछ ।
अझै सन्तुष्टि हुदैन दिनमा सात पटक भोजन गर्नको लागि दौडिरहेको हुन्छ । असम्भव त केही छैन सम्भव छ । गोर्खा जिल्ला आरु चनौटेमा जन्मिएकी म । मध्यम परिवार त्यही माटोमा हुर्किए,कति पटक चिप्लिए,गाउँ कै स्कुलमा क ख रा पढे,मेलापात सकेसम्म गरे पनि ।
घरकी जेठी छोरिको रुपमा जन्मिएकी म मेरो छरछिमेक,आमाबुबा ,दाजुभाइ दिदिबहिनीबाट भने साथ सपोर्ट र अथाह माया अनि प्रेरणा पाएकी छु । सायद त्यसैले होला जता गए पनि मलाई मायाको कमि हुदैन । मान्छेको जीवन गतिशील छ । अनेक दु:ख,सुख झेल्दै बाचेको हुन्छ मान्छे ।
लेखक सिम्रन भट्ट
बल्ल सिके मैले जिवनमा संघर्ष गर्न र जिवनको महत्व बारे । यात्रा गर्दै जादा अनेक थरीका मान्छे भेटाए मैले पाईला-पाईलामा सहयोग गरिदिने बाहानामा बाजि मार्ने दाउमा अनेक अंकुरा पालेर बसेका हुँदा रहेछन ।
मलाई एउटा पाठ सिकयो समयले सिक्ने र नितान्त नजिक भएर बुझ्ने मौका पाए मैले । छोरा मान्छेमा जति बाहिर हेर्दा चमक भलाद्मी देखिन्छन भित्र त्यो भेटाईन मैले सवै छोरा मान्छे गलत हुन भनेकी पनि हैन । मान्छेको विवेक हराईसकेको छ ।
भाग्य संजोग भनु या त समयले मलाई अर्को बाटोमा डोहोर्यो मैले लगभग पहिले काम गरेको १ वर्ष पछि फेरी अर्को अफिसमा जोडिन पुगे । फेरी मैले अरु झन् अनुभव बटुल्न पाए यो अफिसममा पनि मैले धेरै समय काम गरिन तर समय र परिस्थितिसंग नजिक हुन्
झन पाए त्यस पछी म अलि फरासिली भैसकेकी थिए । मेरो एक जना दाईले फेरी मलाई अर्को चुनौतिको बाटो सम्हाल्न दिनु भयो । कति दिन अफिसको काम गरेर बस्छौ अब आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु पर्छ भन्नु भयो ।
मैले केहि सोच्न सकिन । एक छिन टोलाएर मैले भने दाईलाई के काम ? ब्युटिसियन सिक ? मैले भने कसले सिकाउछ । दाईले मज्जाले हासेर भन्नु भयो ” धत !लाटी,पैसा दिएर सिक्नु पर्छ भन्नु भयो ।
मैले हुन्छ भने त्यसपछि दाईले मलाई ब्युटिसियन क्लाससम्म लिनु भयो । मैले सिक्न सुरु गरे । दाईकै साथले मैले ब्युटिसियन सिक्ने अवसर पाएकी मैले केहि आगाडी बधिसकेकी थिए म । यो सिकिसके पछी मलाई NGO अफर आयो ।
त्यहाँबाट सुरु गरेको पश्चिमको यात्रा कैलाली ,डोटि,कंचनपुर,महेन्द­्रनगर,अछाम,बझाङ र बजुराका केही ठाउँमा घुम्ने अवसर पाईएकि छु । नजिकैबाट त्यहाँको कलासंस्कृतिसङ्ग नजिक हुने मौका पाए ।
वास्तवमा हेर्नेको हो भने त्यहाँको जनजीवन त्यति सहज र सजिलो भने छैन । भौगोलिक हिसाबले मिलेको जिल्ला तर बाटो घाटो पछिल्लो समय विकास हुने क्रममै रहेका छन । कहालीलाग्दो सडकको अहिले पनि याद आउँछ । हुन त आफै त्यस्तो बाटोमा पहिलो पटक यात्रा गरेकोले हुनसक्छ । अलिकति मनमा डराएको महसुस गरेकि थिए । मेरो लागि नयाँ नै थियो त्यो ठाउँ ।
त्यहाको चालचलन जति मनमा गढ्यो तर त्यो ठाउँको छुवाछूत र छाउपडी पर्थाले अलि मनमा चिसो गड्यो । छोटो समयको बसाई संगस्ंगै त्यहाँकि दिदिबहिनीसंग नजिक हुने अवसर जुट्यो ।
छाउपडी गोठमा ज्यान गुमाएका कुरा त सुनेकी थिए तर म नजिकै पुगिसके पछि यो विषयमा पनि मलाई थोरै चासो बढ्यो । अन्तर आत्मा देखि खुल्न नमान्ने दिदिबहिनीसंग कुरा गर्न अलि असहज भयो मलाई तर बिस्तारै कुरा गर्न गफिन थाले पछि कुरा खोल्दै गैइन गहभरी आँसु पार्दै पीडा पोख्न थालिन ।
अतिनै छुई-छुई गर्ने त्यो समाजमा अलिकता अन्धोविश्वासको जरा भने पक्कै गाडेको रहेछ । महिनावारी हुँदा पाँच दिन छुट्टै बस्नु पर्ने वाध्याता रहेछ । घरको आगन छेउमा खरले बेरेको सानो झुपडी सानो ढोका भएको घर हुदोरहेछ महिनावारी हुँदा बस्ने ।
कहिलेकाही त त्यो सानो त्यो घरमा मुस्किलले तीन जना अट्ने ठाउँमा सात जनासम्म बस्नु पर्ने बाध्याता रहेछ । एउटै भान्सामा खाना खान नहुने देउता रिसाउछन भन्ने मानसिकता बोकेको समाजमा कहिले चेतना आउछ्होला ।
समाजको डरले भए पनि पढेलेखेका युवती पनि बाहिरै बस्नु पर्ने बाध्याता रहेछ । गुन्यु चोलिमा सजिसजावट नाकमा नत्थी लगाएकी मिजासिलि स्वाभाबका ती दिदी बहिनिको अझै याद आउँछ मलाई । सायद मलाई मनि त्यही गर्छन होला ।
मैले पनि त्यही संस्कार भोग्नु पर्ने थियो होला । सक्छौ आफै आट गरेर अगाडि बढने कोसिस गर्नु पर्छ । मलाई लाग्यो यो समस्या मेरो लागि नै होकि झै लाग्यो । सामाजिक अभियान्ताले पनि यो विषयमा कुरा उठाउनु पर्छ । ताकी बेकालमा ती नारिको ज्यान नजावस । हुन पश्चिमको नारिले काहा मुक्त्त पाएका छन र भौगोलिक हिसाबले जति सुन्दर छ अलिकति विकारपन पनि छ ।
दुख सुख त्यताको बसाई सकेर म राजधानी फर्किने पर्यात्न गरे । मनमा अनेक कुरा खेलाउदै बिदाबारि मागेर म गाडी चडिसकेकी थिए । फेरि आउनु है भन्दै रुमाल हल्लाउदै मलाई बिदाई गरे त्यहाँका दिदी बहिनीले । मन कुडेर म फर्किए ।
अनेक सम्भावना छन । अनेक अवसर छन तर राजनीति खिचातानीले जरा गाडेको छ त्यो ठाउँमा हुनत यो रोग देशै भरी छ । भावनाले जोडिएको साईनो कती गहिरो हुदो रहेछ । भेट्न जति सजिलो हुन्छ छुटन त्यसको तीन गुणा असहज हुदोरहेछ ।
कोही धनी छन् असाध्ये कोही गरिब छन् माग्ने, कहिले होलान् समान दुबैथरी निर्धक्क भैकन बॉच्ने ।” किन ? केको लागि विभेद आखिर मानिस सबै बराबर हुन् हैन । शरीरको बनावट सबैको एकै छ ।
भन्ने हो भने धनीले भन्दा गरिबले बढी मेहनत गर्दछन्त तर फरक यति छ धनीले खाने खाना, बस्ने घर,चढ्ने गाडी,लगाउने कपडा कति मूल्यवान र कति महत्व हुन्छ र राख्छन मान्छे ? कस्तो किसिमको सजावट छ घरमा ? कति मीठा मसिना र पोषिला छन् खाने कुरा ? कति महंगा र मूल्यवान छन् लत्ताकपडाहरु पनि ? तर गरिबको घरमा सधैं अभावै अभाव छ, खान लगाउन पुग्दैन,अन्धकार छ घर ।
कहिलेसम्म रोगब्याधिले थला पर्नु पर्ने उनीहरु । कति दयनीय छ अनाथ असहाय गरिबको जिन्दगी ? तर पनि खुसीले जिउन सिकेका त् छन् । भारी बोक्ने हलो जोत्ने, खेत खन्ने, घर बनाउने डकर्मी, सिकर्मी गर्ने,
दाउरा,घासपात,पशुपालन, आदि विभिन्न किसिमका काम गर्ने पेटभरी खान नपाउने कि खान नजान्ने चिसोमा न्यानो लुगा कपडा लगाउन नपाउने,चाडपर्वमा खुसीले रमाउन नपाउने ,रोगलाग्दा औषधि गर्न नपाउने । आखिर कस्तो जिन्दगि तर मनका धनी रहेछन ।
हुन् त् कसैले पनि सोच्दैनन् अरुको भलाईको लागि । न मैले सोचेको हुन्छु त् अरु कसैले । बिचरा ! गरिब हुन् पाउनु अर्को कुरा हो तर गरिब बाच्न पाउनु त् उसको अधिकारको कुरा हो । एक छाक खान र एकसरो लगाउन पाए रमाउने हामीलाई ढुक्क छ ।
आन्नदले निन्द्रा त् लाग्छ । धनि भएर जति समाजको लागि देखाएका छन् ताकी अरुलाई देखाएका छन् तर सुत्दा आनन्दले कहिले सुत्दैनन सिल्पीङ ट्याबलेट खानु पर्छ बिचरा त्यो धनि भए पछिको नर्गको जिबन ।